Majaladda majaajilada | Hal-abuurka Online
Jees jees Magazine
Majaajilooyinka ayaa sii kordhaya oo caan ah. Waxay noqdeen qayb aad muhiim u ah naqshadeynta garaafka iyada oo ay ugu mahadcelinayaan xaqiiqda ah in iyaga, xirfadlayaasha ay tusi karaan macaamiishooda bandhigyo ku saabsan xaaladaha dhabta ah ee u oggolaanaya inay helaan fikrad macquul ah natiijada. Taasi waa sababta ay u jiraan majaajilo loogu talagalay joornaalada, funaanadaha, buugaagta xusuus-qorka, jadwalka, iwm.
Xaaladdan oo kale waxaanu diirada saari doonaa majaladda majaajilada, Nashqadahaas u oggolaanaya macmiilku inuu muujiyo waxa qaabka joornaalka u ekaan doono ka hor inta aan xitaa lacagta la gelin daabacaadda iyo samaynta orodka, marka riixitaanka timaaddo, laga yaabo inaysan u muuqan mid wanaagsan.
1 Majaajilada joornaalka, sababaha loo isticmaalo
2 12 joornaal majaajilo ah oo bilaash ah si loo soo dejiyo
2.1 A4 jeesjees
2.2 Majaladda majaajilada
2.3 Majaladda furan
2.4 Majaladda daboolka
2.5 Majaajilo muqaal
2.6 Qaabka joornaalka oo buuxa
2.7 Ururinta maaweelada ee Freepik
2.8 Dabool, daboolka dambe iyo qaab-dhismeedka gudaha
2.9 Maadays oo leh 60 xaaladood
2.11 Qaabka Joornaalka Yaryar
2.12 Majaladda saddex-geesoodka ah
Majaajilada joornaalka, sababaha loo isticmaalo
Jees-jeesku waa shay leh miisaan aad iyo aad u badan oo ka mid ah naqshadeeyayaasha sababtoo ah waxay u oggolaaneysaa inay macaamiisha u muujiyaan natiijada shaqadooda si macquul ah.
Sidaa darteed, Majaajilo joornaalku waxa ay noqon doontaa sawir-gacmeedka majaladda, labadaba boggaga jaldiga iyo gudahaba, si uu macmiilku u helo fikrad ah sida uu u ekaan doono marka la daabaco.
Internetka waxaad ka heli kartaa joornaal badan oo majaajillo ah, iyo sidoo kale mawduucyo kale, laakiin miyay faa'iido u tahay oo kaliya in la arko shaqada la qabtay wax ka sii macquul ah?
Runtu waxay tahay maya. Sababtoo ah waxay sidoo kale u adeegtaa sidii kor u qaadida naqshadeeyaha laftiisa, kaas oo bixin kara faylalka dhabta ah ee dhabta ah ee shaqooyinka uu qabtay oo ka dhigo inay u muuqdaan kuwo u dhow, siiya macnaha, mugga iyo haa, xirfadle sidoo kale.
Taasi waa sababta portfolios aad iyo aad u badan ayaa bilaabaya inay isbedelaan si ay u bixiyaan naqshad isku dareysa xaqiiqda iyo kuwa aan la taaban karin, sida sawirada kombuyuutarka, daabacadaha, iwm. Halkii laga lahaa in la daabaco sawirada iyada oo aan la siinin macnaha guud, kiiskan waxaa la siiyaa iyaga oo ku martiqaadaya kuwa u arka inay ku qiyaasaan wax la mid ah gurigooda.
12 joornaal majaajilo ah oo bilaash ah si loo soo dejiyo
Xaaladdan oo kale ma kordhin doonno wax badan, sababtoo ah waxaan ognahay in waxa ugu muhiimsan ay tahay in la haysto qaabab joornaal oo kala duwan si aad u isticmaasho naqshadahaaga, gaar ahaan haddii aadan rabin inaad ka sameyso xoq. Haddaba, xulashooyinka aan soo jeedineyno waa kuwan soo socda:
Tani waa mid ka mid ah qaab-dhismeedka majaladda aasaasiga ah, kaas oo waxaa laga yaabaa inaad u baahato xoogaa taabasho ah markaad ku darto sawirada, laakiin taasi waxay noqon doontaa mid cajiib ah.
Dhexdeeda waxaad ku leedahay xallinta 4800x4000px iyo 300dpi oo tayo leh.
Waad soo dejisan kartaa Halkan.
Doorasho kale ayaa ah tan joornaal, furan oo ka dhigaya inay u muuqato mid hawada ka xiran. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad sawirada ku dhejiso walxaha caqliga leh si natiijada ugu dambeysa la arki karo.
Haddii aad rabto in aad siiso xoogaa caannimada daboolka, laakiin adigoon muujin 100%, tani waa mid ka mid ah majaladda majaajilada ee aad isticmaali karto. Waxaa ku jira ma arki kartid oo kaliya daboolka, laakiin sidoo kale mid ka mid ah boggaga ugu horreeya ee majaladda.
Soo dejinta ee Halkan.
Joornaal majaajilo ah xooga saarida gaar ahaan daboolka ayaa ah doorashadan, halkaas oo leh asal cawl oo aad ku leedahay majaladda xarunta. Laakiin ha werwerin, waxaad si fudud ugu beddeli kartaa asalka cawl midabyo kale.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee dhammaan joornaalada ku majaajiloodaan ee aan horay kuugu baray ayaa ah in hal dhacdo oo keliya la soo bandhigay, ama daboolka ama qaybta gudaha ee majaladda, laakiin ka waran haddii macmiilku rabo inuu arko wax badan?
Markaa template-kani waxa uu noqon karaa waxa aad raadinayso sababtoo ah waa a jeesjees ah oo aad ku leedahay shan xaaladood oo kala duwan, laga bilaabo jeldiga hore ilaa jaldiga dambe, boggu si safaysan, mid ka sii qotodheer iyo koox joornaal ah oo wada jira.
Qaabka joornaalka oo buuxa
Doorasho kale oo lagu heli karo dabool, gudaha iyo xirid (tusaale aragti dhow) waa kan. Halkaas waxaad ku siin kartaa macmiilkaaga faahfaahin gaar ah oo boggaga qaar ah.
Waxaad bedeli kartaa midabka asalka iyo midabka labadaba.
Ururinta maaweelada ee Freepik
Xaaladdan oo kale Kuma siinno sawirka kaliya ee joornaalka majaajilada, laakiin xulashada dhowr ka mid ah. Waana in Freepik aad ka heli karto sawirro badan oo kala duwan oo ku saleysan waxaad raadineyso ama sida aad rabto inaad u soo bandhigto macaamiisha.
Dabcan, xasuusnoow, haddii aanad xisaab lahayn, waa inaad u nisbaysaa qoraaga qoraaga. Haddii aad leedahay akoon Freepik markaa uma baahnid.
Dabool, daboolka dambe iyo qaab-dhismeedka gudaha
Xaaladdan oo kale majaajiladani waa mid aasaasi ah, laakiin waxay ku socotaa ilaa inta ay sii socoto, soo bandhig daboolka hore, daboolka dambe iyo bog gudaha ah oo labanlaab ah. Maya mar dambe.
Asal ahaan waa la bedeli karaa wax walbana waa lagu soo bandhigay, sidaas darteed ka fogaanshaha macmiilka inuu rogo bogga ama aado goob kale si uu u arko natiijada dhamaystiran.
Maadays oo leh 60 xaaladood
Haddii aad rabto inaad siiso macmiilka fursado badan oo uu ku qiyaaso sida uu majalad u ekaan doono, waxaad haysataa noocaan. Waxay u dhigantaa mid la bixiyay, markaa waxay kuu ogolaaneysaa inaad bedesho wax walba, laga bilaabo cabbirka ilaa xallinta. Si aad fikrad ku siiso sida ay u ekaan doonto, waa wax ka badan oo ku filan.
Sida aad ogtahay, maalmaha fasaxa ah, gaar ahaan wargeysyada, waxaa ku jira majaladaha gaarka ah, sida dhaqanka, dhaqaalaha, iwm. Hagaag, ma u malaynaysaa in aanu jirin joornaal lagu jeesjeesayo wargeysyada?
Haa waa jira oo halkan waa tusaale kaas oo waxaad tusi kartaa daboolka dambe, jaldiga hore iyo qayb ka mid ah bogga koowaad.
Qaabka Joornaalka Yaryar
Wixii ah majaladaha yaryar, nooca A5, Tani waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo lagu soo bandhigo naqshadeynta boggaaga gudaha.
Majaladda saddex-geesoodka ah
Ma qiyaasi kartaa inaad tusto macmiilka saddex bog? Hagaag haa, ikhtiyaarkan waad ku heli kartaa. Ma aha in ay u socdaan si ay u arkaan saddex bog oo buuxa, laakiin qayb wanaagsan oo iyaga ka mid ah ayaa sameeya.
Sida aad arki karto, waxaa jira xulashooyin badan oo aad ka dooran karto, iyo majalooyin kale oo badan oo majaajilo ah oo bilaash ah oo aad isku dayi karto naqshadahaaga. Taladayada ugu fiican waa in aad waqti yar ku bixiso si aad u aragto sida ay u egyihiin moodooyinka qaar ka dibna dooro midka ugu fiican si aad u tusto macaamilka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Jees jees Magazine
Jees-jeeska qalabka waraaqaha ee shirkadda
Astaanta ugu fiican: tan ugu caansan taariikhda